टन्सिलले सतायो ? निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय – Khabar Silo
हाम्रो जिभ्रोको ठीक पछाडि बदाम आकारको दुई छोटो छोटो अंग हुन्छ । जहाँ मुखबाट गलासम्म पुग्ने दुई यो अंग हुन्छ जसलाई टन्सिल भनिन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउने कार्य गर्छन् । यसले शरीरको कयौं बीरामितथा संक्रमणबाट बचाउँछ ।तर, कयौं पटक यो शरीरलाई बचाउने को प्रक्रियामा स्वयं नै बिरामी हुन्छ । संक्रमण या कुन अन्य कारणबाट टन्सिलमा पीडा हुन्छ । कयौं पटक यो यति बढ्छ की खान पिउनसमेत समस्या हुन्छ ।
नुनमा एन्टी बायोटिक गुण हुन्छ । यसका लागि हल्का तातो पानीमा नून हालेर मुख कुरा गर्नुहोस् यसबाट निकै लाभ हुन्छ ।हरेक दिन मनतातो पानीमा नुन राखेर या नन अल्कोहलिक माउथवास राखेर मुख कुला गर्दा टन्सिलको समस्याबाट आराम मिल्छ । अझ नुनमा थोरै बेकिंग पाउडर राखेर कुला गर्दा थप फाइदा हुन्छ ।
छाती दुख्ने समस्या छ ? यस्तो छ घरेलु ओखती
काठमाडौँ । छाती दुख्नुलाई कतिपयले गंभिर समस्याको संकेतको रुपमा पनि बुझ्छन् । खासगरी हृदयघात वा मुटु सम्बन्धी समस्याको भयले। मुटुको धमनीमा अवरोध भएमा, मुटु सुन्निएमा, मुटुको मांसपेशीमा समस्या भएमा, घाउ भएमा पनि छाती दुख्छ। त्यस्तै ब्रोनकाइटीस,–निमोनिया, वायु नलीमा संंकुचन एवं फोक्सोको समस्यामा समेत छाती दुख्छ। यद्यपि सामान्य अवस्थामा पनि छाती दुख्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ धेरै शारीरिक […]
मन तातो पानीमा मरिच हालेर पिउने गर्नुस्, हुन्छ यस्तो चमत्कार
काठमाडौं – सामान्यतया स्वच्छ पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुन्छ । पानीले शरीरको विकासमा धेरै मद्दत गर्छ । अनि मरिचले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गरिदिन्छ । मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउँदा त झन् फाइदै फाइदा हुन्छ । यस्ता छन् फाइदाः रक्तअल्पता मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउँदा आइरनको कमी पूरा हुन्छ र रगत कम […]